Enkabeni yezwe lamalahle le-NSW, iLithgow iphendukela ophahleni lwendawo yokugcina impahla yelanga kanye neTesla
ILithgow City Council is smack-bang ezweni elimnyama lamalahle e-NSW, indawo ezungezile igcwele iziteshi zamandla aphehlwa ngamalahle (iningi lawo livaliwe). Kodwa-ke, ukungavikeleki kokugcinwa kwelanga namandla kagesi ekucinyweni kukagesi okulethwa yizimo eziphuthumayo ezifana nomlilo wequbula, kanye nezinhloso zomphakathi zoMkhandlu, kusho ukuthi izikhathi ziyashintsha.
Isistimu yeLithgow City Council engu-74.1kW engaphezulu kwe-Administration Building yayo ishaja uhlelo lokugcina amandla lwebhethri olungu-81kWh Tesla.
Ngale kwa-Blue Mountains nasenkabeni yezwe lamalahle laseNew South Wales, ngaphansi kwesithunzi esifushane seziteshi ezimbili eziseduze zamandla kagesi (esisodwa, iWallerawang, manje esivalwe yi-EnergyAustralia ngenxa yokuntuleka kwesidingo), iLithgow City Council ivuna izinzuzo ze i-PV yelanga kanye ne-Tesla Powerwalls eyisithupha.
Muva nje uMkhandlu ufake uhlelo olungu-74.1 kW phezu kwe-Administration Building lapho uchitha khona isikhathi sawo ukhokhisa uhlelo lokugcina ugesi olungu-81 kWh Tesla ukwenza imisebenzi yokuphatha ebusuku.
"Uhlelo luzophinda luqinisekise ukuthi ibhilidi lokuphatha lomkhandlu lingahlala lisebenza uma kunqamuka ugesi," kusho iMeya yoMkhandlu waseLithgow, uKhansela Ray Thompson, "okhuluma ngokuqhubeka kwamabhizinisi ezimweni eziphuthumayo."
Ama-Tesla Powerwalls angama-81 kWh ahambisana nama-inverters kaFronius.
Vele, intengo ayikwazi ukubekwa kwezokuphepha ezimweni eziphuthumayo. Kuyo yonke i-Australia, ikakhulukazi ezifundeni ezithandwa umlilo womlilo (ngakho-ke, ikakhulukazi kuyo yonke indawo), izindawo ezibalulekile zosizo oluphuthumayo seziqala ukubona inani lokugcinwa kwelanga namandla kagesi uma kunqamuka ugesi okulethwa yimililo esabalele.
NgoJulayi nonyaka, iMalmsbury Fire Station eVictoria yathola ibhethri elingu-13.5 kW Tesla Powerwall 2 nebhethri elisebenza nonozungezilanga ngokunikela nangezimali ezivela eBhange lase-Australia kanye nakuhlelo lweCentral Victorian Greenhouse Alliance lweCommunity Solar Bulk Buy.
"Ibhethri liqinisekisa ukuthi siyakwazi ukusebenza futhi siphendule esiteshini sezicishamlilo ngesikhathi kucima ugesi futhi ingaba yindawo lapho umphakathi ungakhona khona ngasikhathi sinye," kusho uCaptain Malmsbury Fire Brigade uTony Stephens.
Ukuthi isiteshi sezicishamlilo sesicishe singangenwa ugesi, uStephens uyajabula ukuqaphela ukuthi ngezikhathi zokuphela nasebunzimeni, “amalungu omphakathi athintekayo angayisebenzisela ukuxhumana, ukugcina imithi, ifriji yokudla kanye ne-inthanethi ezimweni ezimbi kakhulu.”
Ukufakwa koMkhandlu Wedolobha Lithgow kuza njengengxenye yoHlelo Lwamasu Omphakathi Lomkhandlu lwango-2030, olubandakanya izifiso zokwanda nokusetshenziswa okusimeme kweminye imithombo yamandla, kanye nokunciphisa ukukhishwa kukaphethiloli.
“Lokhu kungenye nje yemiklamo yoMkhandlu ehlose ukwenza ngcono ukusebenza kahle kwenhlangano,” kuqhuba uThompson. "UMkhandlu kanye nabaphathi bayaqhubeka nokubheka ikusasa futhi basebenzise amathuba okusungula nokuzama okuthile okusha ukuze kuthuthukiswe iLithgow."